पल शाह किन जेलमा? कन्फ्युज हुनुहुन्छ भने बुझ्न सजिलो पार्ने नौ प्रश्न र उत्तर – MySansar
कलाकार पल शाहलाई तनहुँ जिल्ला अदालतले पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउन र उनका म्यानेजर कृष्ण जोशीलाई एक लाख धरौटी लिएर पुर्पक्षमा राख्ने आदेश गरेको खबर सबैजसो मिडिया आइसके। तपाईँले पढी पनि सक्नुभयो होला। तर यो कस्तो आदेश हो र कहिलेसम्मका लागि थुनामा पठाइएको हो भन्ने कुरा चाहिँ कन्फ्युज रहेको देखियो। यो विषयलाई सजिलो ढंगमा बुझ्न केही प्रश्न र उत्तर :
१) पल शाहलाई जेल पठाइएको हो?
हो, तनहुँ जिल्ला अदालतको आदेशपछि उनलाई बिहीबार साँझ नै दमौलीको तनहुँ जिल्ला कारागारमा लगिसकिएको छ।
२) यसअघि चाहिँ उनी कहाँ थिए?
यसअघि पल शाहलाई जिल्ला प्रहरी कार्यालय तनहुँको थुनामा राखिएको थियो। यो जेल थिएन। यसलाई न्यायिक हिरासत भनिन्छ।
३) पल शाह अपराधी ठहर भइसकेको हो र ?
होइन। उनलाई कानुनी भाषामा पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाइएको हो भनिन्छ। त्यो भनेको मुद्दाको अन्तिम टुङ्गो नलागुन्जेल जेलमै बसेर मुद्दा लड्ने भनिएको हो।
४) अनि जेलमा त अपराधी मात्र बस्ने हैन र ?
होइन नि। जेलमा कैदी र बन्दी दुवै बस्छन्। कैदी भनेको अपराध ठहर भइसकेपछि सजाय काट्नका लागि बस्नेहरु हुन् भने बन्दी भनेका अपराध ठहर हुन बाँकी तर त्यतिन्जेल बन्दी भएर बस्नु पर्नेहरु हुन्।
५) पल शाहलाई कति वर्षको जेल सजाय भएको हो?
उनलाई लगाइएको अभियोग (नाबालिगलाई जबर्जस्ती करणी) पुष्टि भइसकेको छैन। पुष्टि भएको भए कम्तिमा १२ वर्षदेखि बढीमा १४ वर्षसम्म जेल सजाय हुने हो। अहिले मुद्दाको प्रक्रिया अघि बढिरहेको बेला जेलभित्रै राख्ने कि बाहिर बसेर पनि मुद्दा लड्न पाउने भन्ने विषयमा जेलभित्रै राख्ने आदेश भएको हो।
६) त्यसो भए कति समय उनी जेल बस्नु पर्ने?
निश्चित छैन। मुद्दाको अन्तिम टुङ्गो जहिले लाग्छ, तहिलेसम्म। अन्तिम टुङ्गो लाग्दा निर्दोष ठहरिए भने उनी बाहिर आउन सक्छन्। दोषी ठहरिए भने अहिले बसेको समयसमेत जोडेर कूल तोकिएको जेल सजायमा जोडिन्छ।
७) जेलबाट बाहिरिने कुनै उपाय छैन अब?
अब पल शाहले जिल्ला अदालतको यो आदेशविरुद्ध उच्च अदालत पोखरामा निवेदन दिन पाउने छन्। उच्च अदालतले जिल्लाको आदेश उल्ट्यायो भने धरौटीमा राखेर मुद्दा लड्ने सुविधा दिनसक्छ। तर सामान्यतया यस्तो मुद्दामा त्यस्तो सम्भावना कमै हुन्छ। उच्च अदालतले पनि जिल्लाकै आदेशलाई निरन्तरता दियो भने उनी सर्वोच्च अदालत जान सक्छन्। सर्वोच्चले पनि उच्चको आदेशलाई निरन्तरता दियो भने पलसित अरु उपाय बाँकी हुने छैन। उनले जेलमै बसेर मुद्दा लड्नु पर्ने हुन्छ।
८) पललाई जेलमै राख्नु परेको किन?
न्यायाधीश हरिशचन्द्र ढुंगानाको इजलासले जेलमा राखेर मुद्दा लड्नु पर्ने आदेश दिनका लागि विभिन्न आधार टेकेको छ। प्रमुख आधार हो- हालसम्मका प्राप्त प्रमाणले उनी निर्दोष हुन सक्ने आधार देखिएन। यो नाबालिगलाई ललाई फकाई एक वयस्कले जबर्जस्ती करणी गरेको संवेदनशील मुद्दा पनि हो। त्यसमा यी कुरालाई पनि अदालतले आधार बनाएको छ-
-बलात्कार गरेको कुरा इन्कार गरे पनि पल शाहले राति पौने १२ बजेतिर बियर लिएर पीडितको कोठामा ढोका खोली पसेको हो भनेर स्वीकार गरेको
-त्यसरी नाबालिग किशोरी सुतेको कोठामा किन गएको भन्ने कुरा प्रष्ट पार्न नसकेको
-सरोज वली, योगेश शाह, दुर्गेश थापा र दुर्गा अधिकारीको बयान
-ब्वाइफ्रेन्ड गर्लफ्रेन्डबीच सम्बन्ध हुनु नर्मल हो, प्रेगनेन्ट भएको खन्डमा मात्र स्वीकार गर्ने कुरा आउँछ भन्ने अडियो रेकर्ड
अब तारिख र पेशी तोक्दै अदालतमा मुद्दाको प्रक्रिया अघि बढ्छ। साक्षीहरुको अदालतमा बकपत्र गराइन्छ। पक्ष र विपक्षको बहस हुन्छ र अन्त्यमा न्यायाधीशले फैसला सुनाउँछन्। जिल्लाको फैसला चित्त नबुझे उच्चमा, त्यहाँको पनि चित्त नबुझे सर्वोच्चमा पुनरावेदन गर्न पाइन्छ।
(कभर फोटो तनहुँ जिल्ला कारागार रहेको ठाउँको फोटो र गुगल म्याप अनि पल शाहले अभिनय गरेको फिल्मको स्क्रिनसटको कोलाज हो)